Nepali Sex Stories: बाजे र बाबासित चिकेको
मेरो नाम रोजि हो। म अहिले २६ बर्षकी भएँ। कुरा १० बर्ष पहिलेको हो जब म १६ बर्षकी थिएँ। म गोरी, मोट्ठी अनि अग्ली पनि थिएँ। मेरो दुध मम्मीक जत्रै-जत्रै(३६) थिए। मेरो बाबा(३४ बर्ष), मम्मी(३२ बर्ष) र भाइ(१० बर्ष) हङ्कङ बस्नुहुन्थ्यो। म बाजे(६४ बर्ष) र बज्यै(६० बर्ष) सित नेपालमै बस्थेँ। म ९ कक्षामा पढ्दै थिएँ। म होस्टेल बस्ने हुनाले बिदाको बेला मात्र घर आउँथे। घर आएको बेला म अबेला सम्म सुत्ने गर्थेँ। म जति अबेलासम्म सुते पनि मलाई बाजे बज्यैले कहिले उठाउनुहुँदैनथ्यो र मेरो कोठामा पनि कहिले जानुहुदैनथ्यो। त्यसैले मेरो कोठा भद्रगोल हुन्थ्यो र म कोठामा जे गर्न मनलागे पनि चुक्कुल नलगाइ पनि ढुक्कसाथ गर्थेँ।
एकपटक स्कुल छुट्टी भएर घर जाँदाको कुरा हो, भोलिपल्ट आफन्तको पुजामा जानुपर्ने थियो, बाजे बज्यै बिहानदेखिनै जाने र म १० बजेतिर जाने सल्लाह गर्यौ। म त्यो रात अबेलासम्म टिभी हेरेर बिहान ४ बजे मात्र सुतेँ। गर्मी महिना थियो त्यसैले मैले साँझ खाना खाएर कोठामा गएदेखि नै कपडा खोलेर बसेकीथिएँ। प्यान्टी मात्र लगाएकि थिएँ। प्राए म घरमा जाँदा आफ्नो कोठामा नाङ्गै नै बस्ने गर्थेँ।
भोलिपल्ट म त मजाले निदाइछु। अबेलासम्म म नगएपछि बाजे मलाई लिन घर आएछन्। मलाई बोलाएका रहेछन्, म नबोलेपछि मलाई उठउन मेरो कोठामा पसेछन्। भित्र पसेपछि बाजेले यस्तो देखेछन्:
बुढाले मन थाम्न सकेनछन्। मन थामुन् पनि कसरी १६ बर्षकी मस्त जवानी भएकि केटीको गोला अनि ठुला-ठुला सेता दुधका पोका देखेपछि। नातिनी हो भन्ने कुराको ख्यालै नगरी मौकाको फाइदा उठाउँदै मेरो दुध मसार्न थालेछन्। मैले भने सपनामा होली खेलेको देखेकिथिए र होली खेल्दा यौटा दिदीले सर्ट भित्र हातहालेर दुधमा रङ लगाउदै थिइन। मलाइ निकै मजा भैरहेको थियो। थाहै नपाइ ओड्ने हटाएर पुती खेलाउन पो थाली छु। बुढा त झन् सन्केर नाङ्गै भएर लाडो ठन्काउँदै मेरो दुध बेस्करी
माड्न थाले। म अचानक ब्युँझेँ। साँच्चिकैको ठनक्क ठन्केको ७.५” को कालो लाडो देख्दा त म पागल भएँ। एकदम चिक्न मन लाग्यो। कस्को लाडो हो मलाई पत्तै भएन। म त टाङ फट्टाएर हातले पुती फट्टाउँदै भने,
म: के हेरेर बसेको? छिटो चिक न!
बाजे: मन थाम्नै नसकेर दुध त समाते, तर चिक्नै त अलि हुँदैन रोजि।
म झसङ्ग भएँ। तर मन थाम्न सकिन।
मैले भने: दुध समातेर लाडो ठन्काउन हुनि चिक्न नहुनि हुन्छ? अरुलाई सन्काएर छोड्ने? नचिक्ने भए किन दुध अठ्ठयाएको त? म बज्यैला भन्दिन्छु नत्र।
अनि बाजेले भने: केटी नपाएझैँ आफ्नै नातिनीलाई के चीक्नि भनेर हो के रे अब तँ नै त्यसो भन्छेस भने त ....... यस्तो राम्रो कलिलो पुती नचिकी छोड्ने मन त मलाई पनि कहाँ छ र!
त्यसपछि बाजेले बिस्तारै आफ्नो ठन्केको लाडो मिलाइ मिलाइ मेरो पुतीमा हाले। पहिले बिस्तारै धक्का मार्न थाले। एकछिन पछि अलिकति अलिकति गर्दै बडाउन थाले। मलाई अलि अलि दुखेजस्तो अलि अलि चिलाएजस्तो कस्तो कस्तो भैरहेको थियो। बुढा चिक्दा चिक्दा खप्पीस भैसकेका, मेरो भर्जिन पुतीमा नदुखाइकन पुरै लाडो छिराइसकेछन। मलाई काखमा बोकेर उफार्दै जोड जोडले चीक्न थाले। मलाइ एकदम मजा भैरहेको थियो। बुढा थाकेछन् फेरी सुताएर चिक्नथाले।
बाजेले भने: तँ त तेरो मम्मी भन्दा गरुङ्गी रैछस्। उफार्नै सकिन।
मैले भने: मम्मीलाई नि चिक्यौ र बाजे?
बाजे: तेरो मम्मी त तँ भन्दा सेक्सी छ। तेरो बा नहुँदा बज्यैको आँखा छलेर मलाइ खुब गिज्याउथी। मैले पनि एक दिन मौका मिलाएर रातभर चिकेँ। त्यसपछि त कति चिकेँ कति।
अनि बाजेले एक पटक मेरो चाकमा प्याट्ट पिटे र लाडो पुतीबाट निकालेर मेरो मुखमा राखिदिए। मैले लाडो चुस्न लागेको मात्रै थिए ह्वाल ह्वाल फुसी आउन थाल्यो। मैले फुसी सबै खाएँ र लाडो चुस्न थालेँ। मेरो पुतीबाट पनि ह्वाल ह्वाल पानी बगेको थियो। बाजेले पानीसँग मेरो पुती पनि चाट्न थाले।
म: यस्तो बुढेसकालमा पनि फुसी त ह्वाल ह्वाल निकाल्यौ त बाजे।
बाजे (कड्किँदै): तँ जस्ता त ५ जनालाइ एकै चोटिमा भ्याउछु म त।
बाजे: तेरो मम्मी र उसकि साथीलाई मैले एक्लै चिक्थेँ। तँ त कलिलै छस् नि!
त्यसपछि हामि दुवै जना नुहाउन गयौँ। नुहाउँदा पो बुढाले पोल खोले।
बाजे: रोजि म तँलाई यौटा कुरा नढाँटि भन्छु। तँ नाङ्गै सुतेको थाहा पाएर यो पटक तँ घर आएदेखी हरेक रात म तेरो कोठामा गएर तेरो दुध र पुती हेर्दै छोल्थेँ। बज्यै नभएकोभए उहिले चिक्थेँ तँलाई। बल्ल आज मौका मिल्यो।
नुहाइसकेपछि हामी पुजामा गयौँ।
भाई बाबा र मम्मी घर नहुँदा बज्यैको आँखा छलेर बाजेले र मैले ६ – ७ बर्ष सम्म चिक्यौँ। बाजेले मलाई त्यसबेला मेरी मम्मीसँग चिक्नुको रहस्य र अरु धेरै कुराहरु भनेका थिए। बाजेको कुरा बाट मलाई थाहाभयो की बाबाको शिघ्रपतन हुनेहुनाले मम्मीलाई डोजपुर्याउन नसकेर मम्मी बाजेतिर सल्केको। हङ्कङ् गएपछि मम्मीको कामवाशना पुराहुनसकेन र १ महिना अघि बाबालाई छाडेर पोईला जानुभयो। त्यसपछि भाई र बाबा नेपाल आउनुभयो। बाबा निकै चिन्तित देखिनुहुन्थ्यो। कारण मैले बुझेकी थिएँ। बाबालाई बास्तविक चिकाई सिकाउन मनलाग्यो। बिस्तारै बाबालाई म तिर आकर्षित गर्न थाले। छोटा-छोटा लुगा लगाउने, बाबाको काखमै बस्ने, बाबालाई अंगालोमार्ने, गरेर बाबालाई गिज्याउन थाले। बाबाले पनि मौका
पाउँदा झुक्किएर छोइए जस्तो पारेर मेरो चाक, थाई र दुध छुने गर्न थालिसक्नुभएको थियो। एकदिन बाबा र म मात्र घर भएकोदिन म यसरी बसेकी थिएँ, बाबाको नजर लुकी लुकी मेरो दुधमा छ भन्ने मैले थाहा पाइहाले। मैले पनि घरी घरि दुध माड्दै गफ गर्न थालेँ। अनि स्कर्ट अलि माथि सारेर पन्थामारेर बसेँ ता कि बाबाले मेरो पुती मजाले देखोस। बाबाले त कहिले पुती नदेखे जसरि पो हेर्न थाल्नुभयो। हुन त आमाको पुती पनि अब चाउरि परिसकेको थियो होला। अरुको पुती कसरि देखोस बिचराले।
म: के हेर्नुभएको त्यसरी?
बाबा: केही होईन।
म: मम्मी गए देखि हजुर अर्कै हुनुभाछ।
बाबा: त्यस राडीको कुरा नगर।
म: खास गल्ती हजुरकै हो के बाबा।
बाबा: अब तँ पनि मलाईनै गलत देखिस। त्यसले भनेझैँ म नामर्द भए तिमीहरू कसरी जन्म्यौ त? आकाशबाट आयौ?
म: बच्चा जन्माएर मात्र हुन्छ र? आफ्नो बुढिलाई फकाउन नि जान्न पर्यो नि!
बाबा: के भनेर फकाऊने? सबै कुरा पुर्याएकै त थिएँ। राडिको बुढेसकालमा बैँश आएपछि म के गरम?
म: बुढेसकालमा बैँश आएको होइन बरु बैँश छँदा हजुरले चिक्न नजानेर हो। माल पाएर चाल नपाएपछि के काम? बैँशमा त आमाको पुती भुक्क परेको मस्त थियो। दुध पनि मस्त टाइट पो थियो त।
बाबा: नकचरि, बाबासँग जे मनलाग्यो त्यही बोल्न लाज लाग्दैन तँलाई?
म: हजुरलाई चाहि अघि देखी मेरो पुती हेर्न लाज नलागे नि हुने रे मलाई चाहि सत्य बोल्न नि लाज लाग्नु पर्ने?
बाबा: झ्याप्प देखिहालेँ, तेरो पुती नै यस्तो मजाको छ देखेपछि हेरीरहु जस्तो। तँ सानी हुँदा सँधै म तँलाई नाङ्गै नुहाइदिन्थे अहिले हेरेर के भो र?
म: अहिले नाङ्गै देखे त कट्टु भित्रै झर्ला नि! मम्मीको झैँ चाउरी परेको हो र मेरो पुती?
यती भनेर मैले टिसर्ट खोले। ब्रा त लगाएकै थिइन। नभन्दै मेरो नाङ्गो दुध देखेपछि त बाबाको फुसी झरिहाल्यो। पाईन्ट सबै चिसो भयो।
म: ल भनेको होइन त? यति छिटो माल झर्नेरहेछ हजुरको। मम्मीलाई बिचरा गिज्याएर मात्र छोड्नुहुनेरहेछ।
बाबा: अब झरिहाल्छ त म के गरम्?
म: ल बाबा आज म तपाइलाई चिक्न सिकाउँछु। आउनु मेरो दुध खेलाउनु। झर्लाजस्तो भयो भने नझर्दै मलाई भनिहाल्नु है।
मैले बाबाको कपडा खोलिदीए। बाबाको लाडो फुसी झरेर लुत्रुक्क परेको जम्मा ५” को थियो। मेरो दुध खेलाउन थालेपछि त ठनक्क ठन्किएर ८” को भयो। बाबाको सास छिटो छिटो भैसकेको थियो। बुडाको फेरि झर्नलागेझैँ लाग्यो।
म: बाबा ल एकछिन रोक्नुस।
बाबा: किन? झन मजा भैराबेलामा। फेरी झर्नलाछ के। झरेपछि रोकम्ला।
म: नचिक्दै २ पटक झर्न लागीसक्यो .... अहिले पनि झर्यो भने फेरी ठन्किन्छ त?
बाबा: अब त ५ - ६ घण्टा सम्म ठन्किँदैन।
म: त्यहिभएर त झर्न नदिनु भनेको नी। लुत्रुक्क परेको लाडोले त अहिले कसरी चिक्ने? ल अब त दुखेजस्तो हुन छोड्यो होलानी?
मैले हातले भित्तामा आड लगाएर यौटा खुट्टा बाबाको काँधमा चढाएँ। पेन्टी लगाएकीथिइन स्कर्ट फर्किहाल्यो पुती देखेर बाउ त पागल भयो। झ्याप लाडो पुतीमा छिराएर बेस्करी चिक्नथाल्यो। मैले गाली गरेँ “थुक्क मुजी! कति आत्तिएको? म भागेर जान्छु र? बिस्तारै हान्न। झर्नलाग्यो भने एकछिन रोक्ने अनि फेरी बिस्तारै चिक्ने गर्नुपर्छ के।” (मैले त जोसमा बाउलाइ पनि तँ भनेछु। चिक्न पाएर होला बाउलाई मतलब थिएन) बाउले पनि मैले भनेझैँ रोकिँदै चिक्दै गर्न थाल्यो। २० मिनेट पछि मेरो पनि पुतीमा पानीको मुल फुट्लाझैँ भयो।
बाबा: रोजी! अब त म रोक्न सक्दिन यार। अब झारे हुन्न?
म: अब हुन्छ। बाउ सुन अब सकेको बलले ल्वाम् ल्वाम् पुरै लाडो पुतीमा छिर्ने गरी चिक र फुसी झर्ने बेला लाडो पुतीबाट झ्याप निकालेर मेरो मुखमा हाल अनि मुखमै झार है!
बाबा: हेर न मातेकी, बाउलाई तँ भनेकी!
म: सिमाचिक्नि आफ्नै छोरीलाई चिक्ने बाउलाई जे भने नी भयो नी।
बाबा: छोरी नै रण्डी भएपछि के गर्ने त? बुडीले छोडेर चिक्न नपाएको बेला तँ घरि दुध देखाउँछेस् त घरि पुती देखाउँछेस्। सिमाचिक्नि तेरो पुति देखेको दिनदेखी त मैले तँ मेरो छोरी होस् भन्ने कुरै बिर्सिसकेको थिएँ। कहिले चिकम् जस्तो पो भाकोथियो यार। तँ रण्डी पनि कम छैनस्। आफ्नै बाउलाई पुती देखाएर गिज्याउछेस्।
बाउले ल्वाम् ल्वाम् चिक्दै थियो। म मजा मानेर अँ.... अँ.... अँ.... आ..... आ..... आ..... आ..... गर्दै थिएँ। बाउले पनि आ..... रोजि! भन्दै पुरै ८” को लाडो पुतीमा छिराको थियो। एक्कासी मेरो पुतीबाट पानीको मुलै फुटेझैँ पुतीरस बग्न थाल्यो। बाउले आत्तिएर लाडो पुतीबाट झिकेर के मेरो मुखमा हालेकोथीयो मोटरले भन्दा जोडले फुसी मेरो मुखमा फाल्यो।फुसी मुखमै खेलाउँदै मैले बाबालाइ मेरो पुती चाटेर पुतीरस मुखमा खेलाउन भने। त्यसपछि बाउलाई फ्रेन्च किस गरेँ। भित्रै- भित्रै लाडोरस र पुतीरस घोलेर दुबैले खाएम। बाउ त लास्टै सिथिल भएछ ओछ्यान मा लड्यो। म बाउमाथि सुतेँ।
म: बाबा कस्तो लाग्यो त?
बाबा: आजबल्ल चिक्नुको असली मजा थाहा भयो। बल्ल मैले चिक्न जानेँ।
म: अझै सिक्न बाँकीनै छ। तर पीर मान्न पर्दैन म सिकाउँछु।
त्यसपछि हामी दुवैजना नाङ्गै सँगै सुत्यौँ। १ महिना सम्म मैले बाबालाई ट्रेनिङ्ग दिएँ। चिनेका अन्टीहरु र मेरा केही साथीहरु सँग पनि बाबालाई सेटिङ मिलाइदिए।
Posted by sexjob at 5:42 PM
COME TO SEX WORLD February 23, 2015 at 10:41 AM